မြန်မာတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်သလောက် မချမ်းသာဘူး။ အဲဒါ ဘယ်အကြောင်းတွေကြောင့်လဲ??? ~ Nge Naing
မြန်မာတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်သလောက် မချမ်းသာဘူး။ အဲဒါ ဘယ်အကြောင်းတွေကြောင့်လဲ???
Sunday, November 21, 2010 Nge Naing6comments
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်းကြီးကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုများ ပြုနေသော မေတ္တာရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး နှင့် ဖုန်းပြောခွင့်ကြုံသည့်အခိုက် ကျွန်မမှ ဆရာတော်အား ရန်ကုန်သို့ကြွလာပါက ဆေးခန်းတွင် သွားနှင့်ပတ်သက်သော ကုသမှုများ ကြွရောက်ကုသမှုခံနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်သောအခါ ဆရာတော်မှ ၀မ်းသာစွာလက်ခံပြောဆိုပြီး ကျွန်မကို ဆရာတော်ရေးသားသည့် “မေတ္တာဖြင့်စီးပွားရှာခြင်း” စာအုပ်ကိုဖတ်ပါ ဒါကာမကြီးဟု မိန့်ကြားခဲ့သည့်အတွက် မေတ္တာရှင်ဆရာတော်(ရွှေပြည်သာ)ရေးသားသည့် မေတ္တာဖြင့်စီးပွားရှာခြင်း စာအုပ်ကလေးကို ကျွန်မ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်းကြီး အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအသီးသီးတွင် လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်နေသည်ကို ကြားသိရပါသောကြောင့် ဘာသာ၊သာသနာနဲ့ လူသားများအကျိုးအတွက် နေရာဒေသမရွေး ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုများပြုနေသော ဆရာတော်အား လေးမြတ်စွာဖြင့် ရှစ်ခိုးဦးချ ကန်တော့ရင်း မနေ့က မောင်လေးမင်းလင်္ကာForward mail ပေးပို့လာတဲ့ ဆရာတော်ရေးသားတဲ့ “လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရဝိပဿနာ” ဆောင်းပါးကောက်နှုတ်ချက်များကို ဖတ်ရပြီး မဖတ်ရသေးသောသူများ ဖတ်ကြရလေအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါသည်။
မ၀ါဝါခိုင်မင်း တင်တဲ့ပို့စ်မှာ ဆရာတော်ဟောကြားချက်ကို ချွင်းချက်မရှိ လုံးဝလက်ခံလို့ မူလပို့စ်ပိုင်ရှင် မ၀ါဝါခိုင်မင်းဆီက ခွင့်တောင်းပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များအားလုံး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ဖြစ်ရကျိုးနပ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက် ပြန်လည် ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ညီမလည်း တဆင့်ထပ်ရှယ်ပါမယ် .. လိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေ သိသာ မြင်သာမယ် .. အနည်းအကျဉ်းဖြစ်ဖြစ် လိုက်နာဖြစ်မယ်ဆို အမြတ်ပဲပေါ့ ..း)
November 22, 2010 at 2:30 AM Reply
November 22, 2010 at 7:34 AM Reply
ဘုရားသားတော်ဆိုတာ မြင့်မြတ်ဆုံး လူသားပါ။ ကျုပ်တို့ ပုထစဉ်တွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာနေပါစေ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဥာဏ်ပညာကြီးပါစေ။ ဘုရားသားတော်တွေ အထက်မှာ နေထိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အခု သီရိလင်္ကာက ဘုန်းကြီးတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သူတို့ရဲ့ မြင့်တဲ့ နေရာမှာထားကြတယ်။ အဲဒါဟာ သံဃာတော်တွေ လုပ်သင့်လားဆိုတာ စဉ်းစားသင့်တယ်။ ဒီမိုဝါဒကြောင့် ဘုန်းကြီးတွေလဲ မျက်ကန်းတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် သင်္ကန်းချွတ်ပြီးမှလုပ်။ မိမိတို့ လောကီယုံကြည်ချက်အတွက် သာသနာတော်ကို ခုတုံးမလုပ်သင့်ဘူး။
November 22, 2010 at 8:57 AM Reply
စာအုပ်ထူထူကြီးတွေဖတ်ပြီး ဘ၀င်မြင့်နေတဲ့ ကြက်တူရွေးများ
၀ါးဟားဟား။ ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအချက် တစ်ခုကို မေ့နေတယ်။ မြန်မာ ဒီမိုတွေက သိပ်တုံး.. သိပ်အ ပြီး စာအုပ်ထဲရေးထားသမျှ ယုံတယ်။ ဒီမိုမီဒီယာတွေက ပြောသမျှ အားလုံး ယုံတယ်။ အဖြူကြီးတွေက စကားလုံးလှလှလေးတွေ ပြောတိုင်းယုံတဲ့ .. ငတုံး .. ငအ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ထည့်ပြောဖို့လိုသေးတယ်။
အပေါစားနိုင်ငံရေးစာအုပ်ထူထူကြီးတွေမှာ ဘာသာတိုင်းဟာ ကောင်းတာပဲ သင်ပေးတယ်ရေးထားတော့ ဒီမိုငတုံးတွေက ယုံကြတယ်။ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ကြံဖန်ပြီး အကောင်းမြင်ပေးကြတယ်၊ မိုဟာမက်ဟာ မုဒိမ်းကောင် ကြာကူလီဆိုတာ သူတို့ Quran ကျမ်းထဲမှာ အတိအကျကို ရေးထားတယ်။ ကုလားတွေက မိုဟာမက် မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်တကို ဂုဏ်ယူကြတာပါ။ အဲဒါကို ဒီမိုငတုံးတွေက မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ မိုဟာမက်တန်းတူထားပြီး ပြောဆိုနေကြတယ်။ အဲလောက်တုံးကြတာ။
အရင်တုံးကဆိုရင် Global warming နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရေးနေတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာလို့ ရေတွေလွှမ်းတော့မယ်။ မုန်တိုင်းတွေ ဖြစ်တော့မယ်. . ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ဒီမိုငတုံးတွေက ယုံကြတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီး ပြောကြသေးတယ်။ ၀ါးဟားဟား . . . တုံးလိုက်တဲ့ ဒီမိုငတုံးတွေ။ အခုကျတော့ အဲဒီသတင်းတွေ ဒီမိုမီဒီယာတွေက လုံးဝ မရေးတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်မရေးတော့တာလဲဆိုတာကို မလေ့လာကြဘူးလေ။ ကြောက်အောင် ဖြဲချောက်တုံးက ကြောက်ဒူးတုံပြီး.. ပြီးတော့လဲ Global warming ကိစ္စကို မေ့လိုက်တာ… ဒီမိုငတုံးတွေပါ။ Global warming ဆိုတဲ့ စကားလုံးရော မှတ်မိသေးရဲ့လားကွယ်?
နောက်ပြီး သွေးမတော်သားမစပ် အဖြူတွေက မြန်မာပြည်ကို ကောင်းစားစေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာရှိတယ်လို့ ပြောတော့လည်း ဒီမိုငတုံးတွေက ယုံကြတာပဲ။ သူတို့အဖြူတွေကိုယ်တိုင် သူတို့ ခေါင်းဆောင်တွေကို လူလိမ်တွေလို့ ပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ အဖြူတွေက စကားလုံးလှလှလေးနဲ့ ပြောလိုက်တိုင်း ယုံတာလဲ.. ဒီမိုငတုံးတွေပဲ မဟုတ်ပါလား။ အခုထက်ထိ ဒီမိုမီဒီယာတွေကို မျက်ကန်းယုံနေဆဲ။ စာအုပ်ထူထူကြီးထဲမှာ ရေးထားတာကို မျက်ကန်းယုံနေဆဲ။ တခြားလူမျုိးတွေဘာပြောပြော မျက်ကန်းယုံနေဆဲ. . . . အဲလိုလူတွေများတော့ မတိုးတက်တာကို ထည့်သွင်းရေးဖို့လိုတာပေါ့။
November 23, 2010 at 3:17 AM Reply
ဆရာ ဇော် မျိုး ခင် ဗျား...global warming အကြောင်း အ သံ တိတ် သွား တာ ဆရာဇော် မျိုးပြောမှ ကျနော် သတိထား မိသလိုရှိပါ သည်...အသံကျယ်တုန်းကကျယ် ပြီး တိုးတဲ့ အခါကြ တော့တိုးသွားတာ ဘာကြောင့် လဲ တော့ ကျနော် ကောင်းစွာမလေ့လာမိပါ ...ဆရာဇော် မျိုးသိလျှင် ဒီမှာ ပဲ မျှဝေပေး စေချင်ပါ သည်...
November 23, 2010 at 8:39 PM Reply
မောင်လေး စောတက တက်စရာရှိရင် ဆွေးနွေးလေ သိရတာပေါ့။ အစ်မအတွေ့အကြုံအရတော့ ဒီဆရာတော် ဟောထားတဲ့အတိုင်း အကုန်လုံးက တိုက်ဆိုင်နေတာပဲ များတယ်။ တယာက်နဲ့တယောက် အသေးစိတ် အတွေ့အကြုံတော့ ဘယ်တူနိုင်မလဲ။ ယျေဘုယျကတော့ ဒီအတိုင်းကို ဖြစ်နေတာ အမှန်ပဲ။